Madaxweyne Gaas oo maanta ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhan ah Al-shabaab – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Gaas oo maanta ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhan ah Al-shabaab
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ayaa ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhan ah Al-shabaab, kaasoo uu sheegay mid Shabaabka looga sifeeynayo deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo.
Madaxweyne Gaas ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland meelkasto oo ay joogaanba inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah Al-shabaab, kuwaas oo uu ku sheegay inay kusoo duuleen dalkooda.
“Waxaan ugu baaqayaa dadweynaha Puntland meel kastoo ay joogaan inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah burcad dimeedka kusoo duuley dalkooda, dowladda Puntland iyo shacabkeedu way isku filan yihiin, waana ku filaan jireen inay iska difaacaan shar-wadayaasha, waxaa ballan igu ah oon ballan qaadaynaa in dhulkayaga aanu ka sifayno Al-shabaab, Daacish iyo intii u soo dulaan tagtay inay gumaado shacabkayaga” Ayuu madaxweyne Gaas hadalkiisa raaciyay.
Madaxweyne Gaas ayaa ugu horeyn ka tacsiyeeyay askartii shalay lagu dilay weerarka lagu qaaday saldhig ay ciidamada Puntland ku lahaayeen deegaanka Af-urur ee gobolka Bari, isagoona dhinaca kale ciidamada ku boggaadiyay sida geesinimada leh oo ay isaga difaaceen weerarkaas.
“Waxaan marka hore tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamada difaacayey dadkooda iyo dalkooda iyo saldhigooda ciidanba, sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii shacabka ahaa ee ay shar-wadayaasha ku xasuuqeen tuulada Af-urur” Sidaas waxaa yiri madaxweynaha Puntland C/weli Gaas.
Dhinaca kale, madaxweyne Gaas ayaa sheegay in maalintii shalay uu magacaabay guddi wasiiro ah, kuwaas oo ka shaqeyn doonna sidii ay u qiimeyn lahaayeen dhibaatada dhacday iyo sidii loo gaarsiin lahaa gurmadka dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay dagaalkaas.
“Waxaan shalay magcaabay guddi wasiiro ah oo soo qiimeeya dhibaatada dhacday, kana qeyb qaata gurmadka dadka dhaawaca ah iyo dadkii waxyeeladu kasoo gaartay dhacdadaasi foosha xun” Ayuu yiri madaxweyne Gaas.
Ugu dambeyn, madaxweyne C/weli Gaas ayaa ugu baaqay dowladda fedaraalka Soomaaliya iyo beesha caalamka inay ku taageeraan dagaalka uu maamulkiisa kula jiro kooxaha argagixisada ah ee Al-shabaab.
“Waxaan dowladda fedaraalka iyo beesha caalamkaba ugu baaqayaa inay nagu tageeraan dadaalka adag ee aan kula jirno la dagaalanka shar-wadayaasha ee Al-shabaab, kuwaas oo usoo tafaxaytay inay gumaadaan shacabiga Soomaaliyed” Ayuu hadakliisa kusoo gaba-gabeeyay madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.